Balaa Xiyyaaraa ET302: Daqiiqaawwan 6 dhumaa xiyyaara Itoophiyaa ET302 - BBC News Afaan Oromoo
Gabaasi jalqabaa qorannoo ka'umsa balaa xiyyaara Itoophiyaa ET302 dhiyeenya gadi dhiifame daqiiqaawwan jaha xiyyaarichi qilleensarra ture maaltu akka ta'e mul'isee ture.
Gabaasi kun ragaalee meeshaa daataa balaliinsaa waraabu (FDR) fi kan sagalee kutaa paayileetotaa keessaa waraabu (CVR) irraa argameen qindaa'e.
Gabaasa kanarraa ka'uun daqiiqaawwaan jaha xiyyaarichi qilleensarra ture kanatti rakkoon paayileetota mudate maali, maal gochuf yaalaa turani, maal waliin jechaa turan?
"Hirkoo kiyyan dhabe," Abbaa kaapiteen Yaareed
Rakkoon xiyyaarri ET302 akka kufee caccabu taasise maal ture?
Paayileetiin maqaan isaa akka eeramu hin feene tokko ibsa armaan gadii nuuf kenneera.
A.L.I Bitootessa 10 bara 2011 Dilbata ganama xiyyaarri Itoophiyaa Boeing 737 Max 8 lakkofsa balaliinsaa ET302 hojjettoota 8 dabalatee namoota 157 fe'atee Finfinnee irraa gara Naayiroobiitti balali'uuf qophaa'aa ture.
Akka paayileetiin kun jedhutti lakkoofsi balaliinsaa kallattii xiyyaarri sun itti imalu mul'isa. Fakkeenyaaf ET3xx jedhee kan eegalu gara Baha Afrikaa, ET5xx jedhee kan eegalu gara Ameerikaa akkasumas Et6xx jedhee kan eegalu ammoo gara Baha Fagootti imalu.
Ganama 02፡37፡34- To'attoonni tiraafika qilleensaa buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee haal-dureewwaan hundi guutamuu erga mirkaneessanii booda xiyyaarichi akka ka'uuf hayyama kennaniif.
Xiyyarichis gara daandi irra fiigee ka'u ykn 'Runway' 07Rtti qajeele. Achii boodas balaliinsa eegale.
02፡38፡44 - Xiyyaarichi sochii eegalee daqiiqaa 1 fi sakandii 10 booda odeeffannoon addaa seensarii hamma xiyyaarichi ol ka'e ykn 'Angle of attack' kochoowwan bitaafi mirgaa xiyyaaricharraa dubbisuurraa mul'ate.
02፡38፡46 - Akeekkachiisi 'Master Caution Anti-Ice' dhufuu isaa gargaaraan paayileetii paayileetiif hime. Akeekkachiisni 'Master Caution' jedhamu sirna balaliinsaa xiyyaaraa rakkoon wayii yoo mudatu paayileetotaaf eeru kan kennudha.
Akeekkachiisni amma isaan gahe kun qaamni xiyyaarichaa, xiyyaaricha qorra jabaarraa ittisu rakkoon isa mudachuu kan eeru ture.
02፡38፡58 - Battala kanatti paayileetiin xiyyaarichaa 'Command' jedhee xiyyaarichi 'Autopilot' ykn kallattiifi saffisa murtaa'een akka ofiin balali'u gochuuf yaalus xiyyaarichi 'Autopilot' irra ta'uu akka hin dandeenye akeekkachiisni dhufe.
Sakandiiwwan lama booda 02፡39፡00 irratti irra deebi'uun 'Command' jedhee xiyyaaricha 'Autopilot' irra kaa'uuf yaalus, ammas irra deebiin xiyyaarichi 'Autopilot' irra ta'uu akka hin dandeenye akeekkachiisni dhufe.
02፡39፡06 - Ajaja paayileetiitiin gargaaraan paayileetii to'attoota tiraafika qilleensaa waliin wal qunname. ። Gargaaraan paayileetichaas ''SHALA 2A departure crossing 8400 ft and climbing FL 320'' jechuun gabaasa godhe.
'SHALA 2A' jechuun kallattii Finfinnee irraa gara Naayiroobii geessu yoo ta'u ol ka'iinsa faana 8400 irraa gara faana 32000 bahanii balali'aa akka jiran ergaa dabarse.
02፡39፡45 - Paayileetichi 'Flaos up' jechuun gargaaraa isaaf ajaja kenne. 'Flaps' jechuun qaama xiyyaaraa wayita xiyyaarri ka'uuf fiigu saffisa barbaachisu akka argatu taasisudha.
Xiyyaarri ol ka'iinsa barbaadamurra erga gaheen booda 'Flaps' kana sassaabbata. Ajajni kunis 'Flaps' xiyyaaricha akka ol sassaabu gargaaraa paayiletiif kan kennamedha.
02፡39፡50 - Xiyyaarichi kallattii balaliinsaa digirii 072 irraa gara 197 jijjiiruu eegale. Wayita kana paayiletichi xiyyaarri kallattiidhuma hayyamameef irraa akka turu ajaja kenne.
02፡39፡55 - Xiyyaarichi 'Autopilot' keessaa bahe.
02፡39፡57 - Wayita kana ajaja paayileetichaan gargaaraan paayileetichaa rakkoon xiyyaaricha to'achuu akka isaan mudate to'attoota tiraafika qilleensaa beeksise.
02፡40፡03- Sirni xiyyaarichaa kan ''Ground Proximity Warning System (GPWS)'' jedhamu akeekkachiisa 'akka gadi hin dhidhimne' (DON'T SINK) jedhu kenne.
Kuni xiyyaarichi kallattii irra balali'aa jiruun lafa ykn wahiin walitti bu'uuf yoo jedhu akeekkachiisa paayileetotaaf kennamudha.
02፡40፡03 - 02፡40፡31 Sakandiiwwan 28 jiran keessatti ergaan akeekkachiisaa 'DON'T SINK' jedhu (GPWS) dhaan si'a sadi akka darbee ture galmaa'eera.
02፡40፡27 - Paayileetichi funyaan xiyyaarichaa al takka isa waliin akka ol kaasuuf gargaaraa isaa gaafate.
02፡40፡44 -Paayileetichi si'a sadi 'ol kaasi' (pull up) jedheen. Garagaaraan paayileetichaas waan ajajame raawwate.
02፡40፡50 - Gaaffii paayileetichaarratti hundaa'uun gargaaraan paayiletii to'attoota tiraafika qilleensaa waliin erga wal-qunnamee booda ol-ka'iinsa faana kuma 14 irra turuu akka barbaadaniifi rakkoon xiyyaaricha to'achuu akka isaan mudate beeksise.
02፡41፡30 - Ammas paayileetichi gargaaraan paayileetii xiyyaaricha isa waliin akka ol kaasu gaafate. Ammas akkuma jedhame godhe, gargaarichi.
02፡42፡10- Paayileetichi gargaaraan isaa to'attoota tiraafikaa waliin walqunnamee deebi'uu akka barbaadan akka itti himu gaafate. Gargaaraan paayileetii waan ajajame raawwate. To'attoonni Tiraafikaas hayyamaniif.
02፡42፡30 - To'attoonni Tiraafikaa Xiyyaarri Itoophiyaa lakkoofsa balaliinsaa 302 qabu gara mirgaatti digirii 260 akka naanna'u ajajan. Gargaaraan paayileetii ajajicha fudhate.
02፡43፡04 - Paayileetichi ammas irra deebiin funyaan xiyyaarichaa akka olkaasaniif gargaaraa paayileetii gaafate. Paayileetichi deebisees xiyyaarichi hamma barbaadamuun akka ol hin kaane dubbate.
Xiyyaarichi funyaan isaa hanga digirii 40 gadi jedhe.
Paayileetiin BBC'f yaada kenne kun akka jedhutti akkaataa gosa xiyyaaraa irratti hundaa'uun adda adda haa ta'uyyuu malee xiyyaarri tokko gaafa qubachuuf jedhuyyuu funyaan isaa digirii 3 qofa gadi jechuu qaba.
02፡43፡43- Waraabbiin ni dhaabbate.
Turtii muraasa booda xiyyaarichi toora irraa dhabuu isaanii to'attoonni tiraafikaa Biiroo Qorannoo Balaa Xiyyaaraatti beeksisan. Daqiiqaawwan muraasa boodas oduun Xiyyaarri ET302 kufee caccabeera jedhu dhagahame.
Gabaasi jalqabarratti ba'e Paayileetonni balaa mudachuu malu dursanii hubatanii balaa sana oolchuuf waan irraa eegamu hundayyuu raawwachaa akka turan agarsiisa.
Paayileetonni tarkaanfii barbaachisaa fudhachaa turanis funyaan xiyyaarichaa walitti fufiinsaan gadi garagalaa waan tureef to'achuu dadhabaniiru.
Hoji Geggeessaa Olaanaa Daandii Qilleensaa Itoophiyaa kan ta'an Obbo Tawaldee Gabramaariyam gabaasa duraa wayita dhiyeessan paayleetonni haala rakkisaa keessatti tarkaanfii isaanirraa eegamu fudhachaa turuusaaniitiin ga'umsa isaanii waan mirkaneessaniif Daandiin Qilleensaa Itoophiyaa akka isaaniin boonu dubbatan.
Abbaan Paayileetii Yaareed Geetaachoo turtii BBC waliin taasisaniin ilmi isaanii waahila isaa waliin ta'uun xiyyaaricha to'achuuf waan danda'an hundaa raawwachuusaatiin gootummaasaa mirkaneesseera jechuun miira gaddaan guutameen ibsan.
Balaa Xiyyaaraa ET302: gabaasa kallattii guyyoota lamaan jalqabaa
10 Bitooteessa 2019
ET302: Rakkoon xiyyaara namoota galaafate mudate maal ture?